राजेन्द्र खड्गीले गरे फेरि अर्को खुलासा, मह जोडि पनि छुटेका थिए मैले यसरी मि’लाको हो (भिडियो हे’र्नुहोस)
Homeसमाचारराजेन्द्र खड्गीले गरे फेरि अर्को खुलासा, मह जोडि पनि छुटेका थिए मैले यसरी मि’लाको हो (भिडियो हे’र्नुहोस)
February 21, 2021 admin समाचार 6898
द्ध’न्द्ध निर्देशक राजेन्द्र खड्कीले फेरी वरिष्ट हाँस्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यबीचको सम्ब’न्धका बारेमा पनि खुलासा गरेका छन् । उनी प्रष्ट वक्ता हुन् । त्यसैले उनले धेरै कलाकारका बारेमा खु’लासा गरिदिन्छन् । उनले केही समय अघि दि’वंगत नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र श्वेता खड्काको बारेमा केही नयाँ कुरा सा’र्वजनिक गरिदिएका थिए । उनी पुराना कलाकार भएका का’रण पनि उनीसंग काम नगरेका कलाकार सायदै कम हुन्छन् ।
त्यस’कारण उनको संगत सबै कलाकारसंग छ । उनीहरुको धेरै भित्रि कुरा पनि राजेन्द्र खड्कीलाई थाहा हुन्छ । उनी कुनै पनि कुराको प्र’भाव मत’लब नगरी सबै कुरा सार्वजनिक गरिदिन्छन् । उनले श्रीकृष्ण श्रेष्ठसंगको पहिलो भेटका बारेमा पनि खुला’एका छन् । उनले तँ त साह्रै नै विग्रिस बद्री भन्ने फिल्म पछि उनीहरुबीच सम्ब’न्ध विग्रिएको बताए । उनले मह भन्ने शब्द नै ह भन्ने शब्द मात्र राखेर अगाडी बढ्न हरिवंश आचार्य अघि ब’ढ्न खोजेको बताए ।
उनले एउटा वे’डमै दुईजनालाई संगै सु ता एर उनीहरुलाई अलग हुने नदिएको बताए । उनले दुई जनालाई संगै राखेर २०५८ सालमा संगै राखेर निकै ह प्का एको बताए । त्यो दिन दुई जना नमिलेको भए म गो ‘द् दिन्थे । उनीहरु दुईजनालाई हेटौडा लिएर गएर संगै राखेर सम्झाएको, ह’ प्का एको बताए । उनले अब भने उनीहरुको जोडी अलग हुनै न’सक्ने बताएका छन् ।
अब त सबैको नायक भइसके । उनले त्यती बेला न’मिलेको भए अहिले पनि जोडीको रुपमा देख्न नपाउने बताए । दुई जनाको सम्बन्ध वि’ग्रन थालेपछि मदनकृष्णले निकै भावुक गीत समेत लेखेको बताएका छन् । त्यो गीत यस्तो मा’र्मीक थियो की, उनले मनमा लिएका थिए । – इताजा खबरबाट
ह्वात्तै घट्यो आज सुनको मूल्य, कतिमा कारोबार हुँदैछ ?
इन्द्रेणीमा कल्पना र आलिफको अ’हिलेसम्म्कै कडा दोहोरी, प्रेमको चर्चा च’ल्दा लजाए आलिफ (हेर्नु’होस भिडियो)
February 24, 2021 admin समाचार 5461
सबिता भण्डारी घ’टनाको सत्य तथ्यको खोजी गर्ने, रबि लामिछानेको घो’षणा
June 23, 2021 admin समाचार 4672
नेपालका चर्चित पत्रकार तथा संचारकर्मी रबि लामिछानेले चितवनको चर्चित सबिता भण्डारी घट’ना बारे आफुले रिपोर्टिङ गर्ने बता’एका छ्न। उनले फेसबुक मार्फत एक स्टाटस लेख्दै आफुले विभिन्न दिदी बहिनी मार्फत सबिता भण्डारी घ’टना बारे जानकारी पाएको
बालिका खड्काको पक्षमा कर्णालीकी नेतृ तृसनापनि , मुख्यमन्त्रीलाई राजिनामा दिन सुझाव (भिडियो सहित)
April 25, 2021 admin समाचार 5235
अखिल क्रान्तिकारीकी केन्द्रीय स’दस्य तथा हालैमात्र कर्णाली प्रदेशको सह-संयोजकको ज़िम्मेवारी पाउनुभएकी क्रान्ति’कारी विधार्थी नेतृ तृसना हमालले बालिका खड्काको चि’तकार सवैले मनन् गर्न आग्रह गरेकी छिन् । प्रदेश नं १ का मुख्य’मन्त्री शेरधन राईले तत्काल राजिनीमा
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (242053)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (229952)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (229583)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (228459)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (227961)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (227416)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (226748)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (196986)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (194347)